Real Madrid oo dhegaha ka fureysanaysa heshiis xiddigo is-dhaafsi ah oo ay Manchester United u soo bandhigtay isla markaasna uu qayb ka yahay Paul Pogba – Gool FM
Ahmed Nur June 22, 2021
(Madrid) 22 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa lagu soo warramayaa inay iska indho tireyso dalab qiimo badan oo ay usoo bandhigtay Manchester United si ay laba xiddig oo muhiim ah isu weydaarsadaan.
Dalabka Man United ay usoo bandhigtay Madrid ayaa ujeedkiisu ahaa inay hesho saxiixa Raphael Varane isla markaasna ay dhaafsato Paul Pogba si kooxda reer Spain ay lacag usoo raaciso difaaceeda.
Balse sheekadaas ayaa u cuntami weysey Los Blancos, waxayna jariiradda AS ay warineysaa inay Real Madrid diyaar u ahayn heshiis xiddigo is-dhaafsi ah maadaama ay u baahan tahay lacag caddaan ah oo ay suuqa uga soo tukaameysan karto xagaagan.
Weeraryahanka Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe ayaa ah bartilmaameedka koowaad ee kooxda Macallin Carlo Ancelotti xagaagan, sidaas darteed, waxay haatan diiradda saarayaan inay qasnaddooda kusoo laabato lacag caddaan ah si ay ugu dhaqaaqaan saxiixa Mbappe.
Si kastaba ha ahaatee, Manchester United ayaa si aad ah u baacsaneysa saxiixa Varane kaasoo qandaraaskiisu dhici doono xagaaga dambe, waxayna isku dayday inay Pogba is dhaafsiiso maadaama isaguna uu geli doono sanadkii ugu dambeeyay heshiiskiisa.
Paul Pogba iyo Raphael Varane ayaa haatan xulka qaranka Faransiiska u matalaya tartanka qarammada qaaradda Yurub ee Euro 2020.
Ra'iisul wasaaraha dalka Taliyaaniga oo ku baaqay in fiinaalka tartanka Euro 2020 lagu qabto magaalada Rome... (Maxay tahay sababta uu u dalbanayo in London laga wareejiyo?)